Iimpawu zomatshini wokucheba ingca ngumsebenzi othe tyaba, ukusebenza ngokulula, kunye nokukwazi ukusika okunamandla kwezinto ekufuneka zinqunyiwe, ikakhulu ingca, kwaye zilungele ingca enemveliso ephezulu kunye neepaki ezinkulu. Umatshini wokucheba ingca usika ingca ngokuhamba kwezinwele ...
Iqela lokuthengisa likaZhengchida liye kwi-22th Hortiflorexpo IPM eBeijing Exhibition ngo-Septemba 16-18, 2020. Umsitho wokuvula yayingumboniso omhle. Ngenxa ye-convid-19, lo ngumboniso wokuqala kunye nomboniso kuphela esi ...
Kungekudala, uZhengchida wayenamalungu amatsha kumasifundisane, awayeze nokusebenza okuphezulu kunye nomgangatho ongcono kwiimveliso. Zizixhobo ezizenzekelayo zoMatshini. Iprojekthi yophuhliso loomatshini oluzenzekelayo yaqalwa ekuqaleni kuka-2019. Iqela leenjineli ezinamava lasekwa njenge ...